यौन/स्वास्थ्य – Karnalikhabar
प्रकाशित मिति : बुधबार, भदौ २१, २०७४
काठमाडौं । संसारमा पाइने १०० बढी प्रजातिका यार्सागुम्बा दुर्लभ, बहुमूल्य र प्रयोगका लागि उपयुक्त मानिदैनन् । नेपालमै पाइने ३ प्रकारका यार्सागुम्बापनि सबै प्रयोगयोग्य र बहुमूल्य छैनन् । वनस्पतिविज्ञका अनुसार नेपालमा पाइने
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, भदौ २०, २०७४
बिहान फ्रेश महसुस गर्नका लागि राती मिठो निन्द्रा लाग्न अत्यावश्यक छ । मानिसहरु सुत्नका लागि बेडमा पल्टिएपनि निकै बेरसम्म सुत्ने कसरत गरिरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं पनि यहि सूचीमा पर्नुहुन्छ भने यी सजिलो तरिका अपनाएर मज्जाले
एजेन्सी – मुसा , झिंगा , उडुस आदिको कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाइंलाई यसबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यो तरिका निकै नै सजिलो छ । १) मुसा: मुसालाई पुदिनाको गन्ध मनपर्दैन । यदि तपाई
यी हुन् शरिरमा क्यान्सर रोग भए नभएको पत्ता लगाउने ७ तरिका: डा. बराल काठमाडौं। बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.राजेन्द्र प्रसाद बरालले नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको बताए ।
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । पेटको वरिपरिको बोसो
प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ १९, २०७४
– काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ, मानिसमो शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। – सूर्यको किरणद्वारा उत्पन्न हुने समस्याका लागि काँक्रो लाभदायी हुन्छ । यसको बोक्रामा नै म्याग्नेसियम,
एपेन्डिसाइटिसः कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ ८, २०७४
एपेन्डिसाइटिसको कामबारे अहिलेसम्म यकिन जानकारी छैन । कोही एपेन्डिसाइटिसलाई राम्रो व्याक्टेरियाहरुको घर भन्छन्, भने कोही यसलाई काम नलाने अंगको रुपमा लिन्छन् । एपेन्डिसाइटिस ठूलो आन्द्राको पुछारमा हुन्छ । हातको आला जस्तो
प्रकाशित मिति : बुधबार, भदौ ७, २०७४
काठमाडौं– लामो अनशनपछि उपचाररत डा गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै बाढी पीडितको सेवामा खट्ने भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा केसीलाई आज डिस्चार्ज गर्ने उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताएका छन्। डा
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, भदौ ६, २०७४
पेट दुख्ने समस्या नभएका मानिस सायदै होलान्। गम्भीर रुपमा होस् या सामान्य प्रकारको नै किन नहोस् पेट दुख्ने समस्या सबै मानिसले भोगेका हुन्छन्। त्यसैले पेट दुख्नुलाई धेरैले सामान्य रुपमै लिने गरेको पाइन्छ। तर, कहिलेकाहीँ पेट